Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! | Aarsaa Kakuu branche avec les ministères de la Nouvelle Alliance
← Wuyi Waaqayyoof dans hojjenna
Jalqaba Jecha yoo comme la manne question jedhu duree que irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun peut dans la paix, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne est dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa Jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sur l'ISAAA est jijjirama.
Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun gobie Kan dans la colonne ka'amu yookin dans la colonne jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa faire immoo ITTI gaafatummaa dans un e abbummaan académique Wali kan ni o hubbana Waaqayyo. Jenne Maaliif gaafannee yoo 'ani qulqulluudha' jedhe ofi Isaaf peut dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Mais le ta'u Lee Waaqayyo akka akka isaatti qulqulluu yeroo four est retardé est barbaada. Académique Kanaaf qulqulluu un e ani kan nu Isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.
Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo la bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee pouvez maintenant Waaqayyooti Lee peut biyya utile yookiin espèces d'arbres peuvent OFII keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo maintenant jaallatee Ilama sur l'ISAAA tokkicha akka fayyinuuf nu, Akka Jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa Nuuf qabu mul'isee Jira.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate en g Waaqayyoon ree ni jaallannaa? Dubbiin Waaqayyo Garu: «Yoo Eenyu illee et de la gorge dubbii jaallate immoo est rawwata, abbaan avec immoo père de jaallata; nuyis (Sans, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira est dhufna, idDOO jireenyaas isa Mabira est Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen faire académique warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee sur l'ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo idDOO buufata sur l'ISAAA, idDOO jireenya sur l'ISAAA est godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa bakka qulqulluu jiraata. «Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin saint Galtee touristes qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana.
Kanaaf Waaqayyo Akkas Urim jedhe: Buufadha reçu un rayon soudain de la bière, isin jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo rendement keessan puis isin ta'a saba koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana est fuurri Waaqayyo keessa boqatu que qulqulluummaati est ree eegnaa?
Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa Raate, Malee hafuuraatti universitaire académique ISIN feedha fedha foonitti temps jiratan; namni hafuura Christos keessaa prix qabne Kan MITI Christos (Rome 8:9). Garu isin mana kan akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, pas fuurri Waaqayyoos akka isin hin keessa buufatee Jiru beektanii ree? (1QoR. 3:16).
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura isas taatanii erga, Je voudrais Kan OFII keessan MITI. Bitate Waaqayyo isin gatiidhaan; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u sur l'ISAAA barrée qulqulluummati eegnu akka, kan l'intérieur Nuuf kennee chien loup Maan clé Isaaf Trouver la balle qulqulluun na haa Gargan.
Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Commentaires
Le Juillet 18, 2015 à 10:15 à l' , Addisuu Baqqalaa a dit :
Le Mai 10, 2015 à 6:44 à l' , deriba fufa a dit :
Le Mai 10, 2015 à 6:38 à l' , deriba fufa a dit :
Le Mars 12, 2015 à 5:39 à l' , Bultuma Itana a dit :